You are here: Home Home Abaal-marinta hablihii imtixaannada ugu sarreeyay
Dharaaro: Marwada Koowaad ee Jamhuuriyadda Somaliland Marwo Aamina Sheekh Maxamed Jirde ayaa xaflad ay soo qabanqaabisay Akaademiga Nabadda iyo Horumarku ku abaal-marisay hablihii ugu sarreeyay imtixaannadii Dugsiyada Sare iyo Dhexe ee Somaliland. Xafladdan oo lagu qabtay Hotel Maansoor subaxnimadii ay bishan Oktoobar ahayd 2da, 2011ka, waxa ka soo qayb-galay dadweyne iyo madax ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana ka mid ahaa: Xildhibaan Baar Siciid oo ka tirsan Golaha Wakiillada iyo Xildhibaa Faadumo Jaamac oo ka tirsan Golaha Guurtida. Waxa kale oo ka soo aqyb-gashay Aamina Maxamuud Diiriye oo ah Agaasimaha Samafalka ee Madaxtooyada. Waxa kale oo xafladdan goob-joog ka ahaa hawl-wadeenno ka socday Akaademiga Nabadda iyo Horumarka oo uu hoggaaminayay Boobe Yuusuf Ducaale oo ah Ku-xigeenka Agaasimaha Fulinta ee Akaademiga.
Waxa kale oo xafladdan ka soo qayb-galay sagaal ka mid ah hablihii imtixaannada ugu sarreeyay, waalidiintoodii iyo maamulayaashii Dugsiyada.
Aayado quraan ah ayaa xafladdan lagu furay. Xubno ka socday kooxda SOCSA ayaa qaaday heestii astaanta qaranka Somaliland.
Soo-dhaweyntii Hibo Maxamed Kheyrre oo cilmi-baadhe ka ah Akaademiga Nabadda iyo Horumarka, waxa madasha furay Boobe Yuusuf Ducaale oo ah Ku-xigeenka Agaasimaha Fulinta ee Akaademiga. Ereyo soo-dhaweyn ah ka dib, wuxu Boobe ka hadlay sababta ay xafladdan u qabteen oo ah dhiirri-gelinta hablaha si ay kaalintooda uga qaataan horumarka dalka.
Labada maamule ee Dugsiyadii labadii hablood e imtixaannada ugu sareeyay ayaa iyaguna hadallo mahad-naq iyo dhiirri-gelinba leh madasha ka soo jeediyay.
Baar Siciid oo ka tirsan Golaha wakiillada ayaa iyaduna ereygeedii tidhi, ka dibna waxa lagu soo dhaweeyay makrifoonka marwada Koowaad ee Jamhuuriyadda Somaliland. Ugu horreyn waxay u mahad-naqday Akaademiga Nabadda iyo Horumarka. Marwo Aamina waxay hadallo guubaabo iyo dhiirri-gelin ah u soo jeedisay hablihii dedaalay ee kaalmaha koowaad ka galay imtixaannadii Dugsiyada sare iyo kuwa dhexeba. Marwo Aamina waxay hanbalyo gaar ah u dirtay Dugsiyada dawladda ee darajooyinka sare la boobay dugsiyadii gaarka ahaa.
Intaa ka dib marwada koowaad waxay bixisay abaal-marintii loogu talo galay hablaha ee dhiirri-gelinta ahaa oo ka koobnayd:
1. .Shahaadado ay ka sinnaayeen,
2. Hadyado ay ka sinnaayeen,
3. Lacag dhammayd 1,200$ oo la guddoonsiiyay gabadhii ugu sarreysay Dugsiyada Sare,
4. Lacag dhammayd 720$ oo la guddoonsiiyay gabadhii ugu sarreysay ugsiyada Dhexe,
Hablihii la abaal-mariyay waxay ahaayeen:
1. Nasra Jaamac Cabdillaahi Bulxan – Ileys,
2..Muniira Maxamed Axmed cabdillaahi – Ileys,
3. Muna Cabdillaahi maxamed Axmed – Ileys,
4. Faadumo Maxamed Ismaaciil Cabdi - Ileys,
5. Nimco saleebaan cali kooshin - Ileys,
1. Sahra Aw Ciise Jaamac qaalib - Sheekh Muxumed warsame,
2. Hodan Maxamed Ibraahin Ciise - Oday,
3. Maryan Maxamuud Maxamed Cigaal - Nuuraddiin,
4. Ubax Cabdiraxmaan Axmed Cabdi - Al-Kheyr,
5. Hodan axmed Cabdi Cilmi - School of Tomorrow,